Tsvaga kuti mapfekero echinyakare akaita sei muIndia | Kufamba Nhau
Susana Garcia | | tsika nemagariro, General, India
Patinoenda kune dzimwe nyika dzine tsika dzakasiyana zvachose nedzedu tinoda kucherechedza zvese, nekuti inoshanduka kubva gastronomy kuenda mukushandisa uye tsika kana zvipfeko. Nhasi tichataura nezve zvipfeko muIndia. Kunyangwe hazvo mazuva ano munyika zhinji iwe uchiona zvipfeko zvakafanana nekuda kwekudyidzana kwenyika, chokwadi ndechekuti munzvimbo zhinji dzimwe tsika dzichiri kuchengetedzwa nemapfekero chaiwo nezvimwe zvidimbu izvo zvichiri chikamu chetsika yavo.
ari zvipfeko zvakajairika zvinomiririra tsika dzenzvimbo imwe neimwe ndosaka tichiwana zvipfeko zveIndia sechimwe chinhu chiri mutsika yaro. Tichaona chimwe chinhu pamusoro peiyi mhando yezvipfeko zvinoshandiswa muhupenyu hwezuva nezuva kana iyo inoshandiswa mumhemberero uye nhambo dzakakosha.
1 Kufamba kuenda kuIndia
2 Zvipfeko zvevakadzi muIndia
3 Zvipfeko zvevarume muIndia
Kufamba kuenda kuIndia
Kana tichienda kuIndia, sekune chero imwe nzvimbo, isu tingatofanira kuchinjira zvishoma kutsika dzavo. Izvo zvipfeko zvine ruvara chaizvo uye isu tichaona micheka yakawanda isinganzwisisike izere neruzivo, nemicheka yakajeka. Icho chinhu chinokwezva kutarisa kwedu. Asi zvakare Zvakakosha kuenderana nezvavanenge vajaira. Kazhinji, hazvisi zvakajairwa kuti vakadzi varatidze zvizere makumbo avo kana mapendekete, saka zvinogara zvirinani kupfeka mbatya dzakangwara nehembe dzinofukidza mapfudzi kana pamwe jira kana tichifanira kuzvigadzirisa kuti tizvifukidze. Kana isu tichiremekedza tsika dzavo, kushanya kuIndia pasina mubvunzo kuchave kuri nyore uye tichanakidzwa nako zvakanyanya.
Zvipfeko zvevakadzi muIndia
MuIndia mune chipfeko chine hunhu uye zvirokwazvo sari yevakadzi inouya mupfungwa. Izvi ndizvo chaizvo zviri jasi rinonyanya kuzivikanwa uye rinoshandiswa nevakadzi veIndia nenzira yechinyakare. Icho jira rinoyera mamita mashanu uye rakafara 1.2. Mucheka uyu unosungirirwa wakakomberedza muviri neimwe nzira, uchigadzira rokwe. Iwe unogona zvakare kuwedzera bhurauzi uye siketi refu inonzi peikot. Idzi ndidzo nguo dzatichanyanya kuona uye dzatichanyatso farira. Dhizaini uye mavara ayo haaperi uye anogona kuchinjirwa kuzviitiko zvakasiyana siyana zvichienderana nemhando yemachira kana mapatani avo. Vazhinji vashanyi vanouya kuzotenga yakanaka sari sechiyeuchidzo.
Chimwe chipfeko icho inoshandiswa nevakadzi veIndia ndiyo Salwar kameez. Salwar izita rinopihwa bhurugwa rakafara rinokwana mumakumbo uye inguvo yakasununguka. Rudzi rwemabhurugwa aya rwakatozove nembiri makore apfuura mutsika nemagariro edu. Iwo anowanzo shandiswa munzvimbo kunoitwa basa rakaoma senge mumakomo uye inguo zvakare yakakodzera varume. Nguo refu-refu inosvika pamabvi inowedzerwa kumabhurugwa aya. Muzhinji, zvipfeko izvi zvinowanzoenda zvakafanana nesari.
Zvipfeko zvevarume muIndia
Muvarume mune zvimwe chaiwo zvipfeko senge dhoti. Iri ibhurugwa jena rakanyatso chena iro rinogadzirwa nemucheka mutsvuku wehurefu hwesari ingangoita uye iyo yakatenderedzwa muchiuno, ichipfuura nemumakumbo ndokumiswazve muchiuno. Inogadzikana uye yakajeka uye inowanzo chena muvara, kunyangwe paine mamwe mumvuri senge kirimu. Kunyangwe ichitakurwa muIndia yese zvinowanzoitika munzvimbo senge dunhu reBangal.
Imwe yenguo zvakajairika muIndia zvevarume ndiko kurta. Kurta inopfekwawo munzvimbo dzakaita sePakistan kana Sri Lanka. Ihembe refu rinodonha kusvika pamabvi kana kutombodzikira zvishoma. Dzimwe nguva vakadzi vanopfekawo, kunyangwe mune ipfupi vhezheni uye nemamwe machira ane mavara kana nemamwe mapatani, nekuti vanowanzo shandisa maruva mazhinji mapatani. Uku kurta kunogona kuve kuchinyakare kupfekwa ne salwar bhurugwa kana dhoti.
Kune mbatya dzinoshamisa uye izvo hazvishandiswe zvakafanana kwese kwese, sezvazviri kune iyo lungui, iyo yataizoona kunge siketi refu yakasungwa muchiuno. Ichi chidimbu chinogona kushandiswa nenzira dzakasiyana uye zvichienderana nenzvimbo yainopfekwa nevarume, vakadzi kana vese. Semuenzaniso, muPanjab vane zvidimbu zvine mavara uye vanogona kupfeka vese varume nevakadzi, muKerala ine peculiarity yekuti yakasungwa kurudyi uye zvese zvakapfekwa uye munzvimbo dzakadai seTamil Nadu varume chete vanozvipfeka uye yakasungirwa kuruboshwe. Icho chidimbu chekotoni uye zvinoenderana nenzvimbo yacho inogona zvakare kuve mune rimwe vara kana iine mapatani akasiyana uye mavara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Indian zvipfeko